अविदको उपासना – Janaubhar
प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ १९, २०७० | 135 Views ||
औंला भाँची वर्षहरु गन्नुहुन्छ आमा
राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ आमा
यति नातिनातिना छन् यति छोराछोरी
जति भए पनि तिनको माया बराबरी
तिनकै कुरा सुनी दङ्ग पर्नुहुन्छ आमा
यसरी आफ्ना मार्मिक शब्द भावनाका साथ आमा सम्झने गायक हुन्– अविद । उनले आफ्नो एकल एल्बम ‘उपासना’मा यो गीत पहिलो स्थानमा राखेका छन् । आमाका सपना, आदर्श र आकांक्षालाई उक्त गीतमा अविदले निकै सुक्ष्मतम् ढंगले अभिव्यक्त गरेका छन् ।
‘उपासना’ अविदको पहिलो एल्वम हो । यसमा उनको एकल स्वर र संगीत रहेको छ । मूलतः उनी संगीतकार हुन् तर ‘उपासना’मा संगीतकार, गायक र रचनाकारको रुपमा एकसाथ देखिएका छन् । उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व ‘उपासना’मा प्रकट भएको छ ।
सुरप्रभा गीतसंगीत प्रा.लि.ले बजारमा ल्याएको ‘उपासना’मा आठवटा आधुनिक गीतहरु समावेश गरिएको छ । गीतकार भावेश भुमरी, हेमन्त विवश, विष्णु कल्पितको एक/एक वटा रचना छ भने बाँकी पाँचवटा गीत संगीतकार अविदले रचना गरेका छन् । संगीत संयोजन वि.वि. अनुरागी, पविधान खालिङ र समील श्रेष्ठको रहेको ‘उपासना’को प्रस्तुतकर्ता सुश्मा श्रेष्ठ हुन् ।
जीवन र जगतका बहुआयाम र रङहरुको कलात्मक औ सांगीतिक अभिव्यक्ति ‘उपासना’को विशेषता हो । विषयवस्तुको विविधताले ‘उपासना’ इन्द्रेणीमय बनेको छ । नेपाली सुगम संगीतको क्षेत्रमा यो उपासना एउटा फरक स्वाद र शैलीको एल्बम हो । यसमा समाविष्ट गीतहरु निकै कर्णप्रिय र मार्मिक छन् ।
अविदले सबै गीतहरुमा न्याय गरेका छन् । शब्द र भावको गहिराइलाई उनले गम्भीररुपमा आत्मसाथ गरेका छन् । शब्द र बिम्बहरुलाई औधी जीवन्त र लयात्मक बनाएका छन् । ‘उपासना’का गीतहरुमा डुब्दा उनी एक गम्भीर प्रकृतिका संगीत सर्जक हुन् भन्ने अनुभूति सहजरुपमा हुन्छ ।
त्यसो त शास्त्रीय संगीतमा अविदको राम्रो दख्खल छ । त्यसकारण उनी शब्दको भाव र मर्ममा डुबेर संगीत सिर्जना गर्छन् ।
वि.सं. २०४९ सालदेखि अविदको संगीतयात्रा शुरु भएको हो । त्यहीबेला उनले संकलन गरेको घुमीफिरी चाड आउँदा बोलको लोकगीत शक्तिकुमार श्रेष्ठको स्वरमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको थियो । ‘उपहार दिएँ मैले हृदयको फूल’ बोलको उनको रचना २०५१ सालमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको थियो । जसमा शक्तिकुमार श्रेष्ठको स्वर र संगीत रहेको थियो । २०५४ मा रेडियो नेपालमा उत्कृष्ट भएको ज्ञानेन्द्र गदालको रचना रहेको गीतमा अविदकै संगीत रहेको थियो । अहिलेसम्म झण्डै दुई दर्जनजति गीतहरुमा संगीत दिएका अविद अधिकृत तहका जागिरे पनि हुन् ।
संगीतका गम्भीर साधक अविदको उपासना नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रमा एउटा अमूल्य कृतिको रुपमा रहनेछ । सबै किसिमका श्रोताहरुमा गम्भीर प्रभाव छाड्न सक्ने यी बहुप्रतिभाशाली संगीतकार, गायक एवम् रचनाकार अविदलाई हार्दिक बधाइ एवम् शुभकामना ।
प्रस्तुतिः के.एल. पीडित
प्रकाशित मितिः २०७० जेठ ५ गते आइतबार
Prevडाँगी भन्छन्– समय आउँदैछ
Next‘जमिन्दार’लाई ‘जुँगा’ सकस !